बुर्तिवाङ होटेलमा झुण्डिएकी १९ वर्षिया राधिकाको आयो यस्तो सनसनीपूर्ण रहस्य ! – ebaglung.com
२०७४ चैत्र १०, शनिबार १२:१९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ चैत १० । विवाहको १४ औं दिन सम्म लोभ लाग्दो दाम्पत्य जीवनमा रमाएका थिए झविलाल पाण्डेय र राधिका न्यौपाने । १५ औं दिनको विहानपख विस्तरामा श्रीमान संग मुस्कुराउँदै उठेकी राधिका केहि वेर पछि घरबाट निस्कई र त्यही विहानीको मुस्कान नै उनका श्रीमानका लागि अन्तिम मुस्कान बन्न पुग्यो ।
उनि अर्थात केहि दिन अघि वुटवलको दुर्गा मन्दिर लाईनमा रहेको वुर्तिवाङ् होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी १९ वर्षिया राधिका न्यौपानेको घटना निकै रहष्यमय बनेको छ ।
फागुन १६ गतेका दिन पाल्पाको पुर्वखोला गाउँपालिका वडा नम्वर–२ , जलपाका ३० वर्षिय झविलाल पाण्डेय संग वुटवलको गोलपार्क माईती घर भएकी न्यौपानेको धुमधाम संग मागी बिवाह भएको थियो । उनले उक्त होटलमा आफ्नो वास्तविक नाम ढाँटेर श्रेया नेपाल लेखाएकी छन भने ठेगाना पनि ढाँटेर तानसेन नगरपालिका ३ लेखाएकी रहिछन् ।
विवाह भएको दिन देखि आफुहरुको सम्वन्ध एकदमै सुमधुर रहेको र आफुहरु दुवैजना फागुन २९ गते गोलपार्क स्थित ससुरालीमा गएको पत्नी वियोगको पीडामा रहेका पाण्डेले बताए ।
उनले भने ‘ उनि र म विहान हाँसी खुशी उठ्यौं , मेरो दिदी वुटवलमै रहेकोले म उहाँलाई भेट्न जान्छु भनेर निस्किएँ । म हिडेको केहि वेरपछि उनले घरमा बैंकमा जान्छु भनेर बहिर निस्की छन् । म दिदीकोबाट साँझ ससुराली मै आएर सोद्धा त्यस्तो खवर पाएँ ।
अर्को दिन देखि फोन गर्दा कति वेला स्वीचअफ गर्ने त कति वेला केटा मान्छेले उठाउने गर्न थाल्यो । चौथो दिन चैत ३ गते साँझ एक्कासी वुर्तिवाङ् होटलको कोठामा मृत फेला परेको खबरले छाँगाबाट खसे जस्तो भएको छु । ’
बुटवल स्थित एक बैंकमा जान्छु भनेर हिडेकी न्यौपानेको ब्यागमा चैत्र २ गते विहान साढे पाँच वजे छुट्ने धरानको बस टिकट फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । ९ सय रुपैयाँ भाडा तिरेकी न्यौपाने धरानको वसपार्कमा वेहोस भएर ढले पछि टिकट काटेर पठाएको बताईएको छ । वुटवलकी मान्छे उनी एक्कासी धरान किन पुगिन ? को कसलाई भेटिन ? उनको साथमा अरुपनि कोहि थिए कि ? भन्ने वारे पनि खोज अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
धरान बसपार्कमा बेहोस अवस्थामा ढलेकी न्यौपानेलाई कसले टिकट काटेर बुटवल पठायो ? बुटवलको बुर्तिवाङ होटेलमा आईपुग्दा उनको अवस्था कस्तो थियो ? होटेल सन्चालकले कुन अवस्थामा देखेका थिए ? कुनै छद्मभेषीको करतूत हुनसक्ने पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ । यस दिशामा पनि प्रहरी अनुसन्धान भैरहेको विश्वास गरिएको छ ।
बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार शवको पोष्टमार्टम भएको छ । राधिकाले प्रयोग गर्दै आएको फोन अहिले पनि एक पुरुषले उठाउने गरेका छन् । सुरुमा ती पुरुषले नेपालगञ्ज छु भनेका थिए । पछि फोन गर्दा लमही छु भनेको बताईएको छ ।
धरान पुगेकी न्यौपानेको फोन कसरी पश्चिम तर्फ फेला प-यो ? वा ती पुरुषले ठेगाना गलत भनेका छन् ? यसवारे पनि प्रहरी खोज अनुसन्धानमा रहेको छ । वुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक भिमलाल भट्टराईले यस घटनावारे अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाईएको बताए ।
पाल्पाकै निस्तेखोला गाउँपालिकाको श्रृष्टि प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक रहेका उनका श्रीमान झबिलाल पाण्डे विवाहको १५ दिनमै पत्नी वियोगको पीडा यसरी सुनाउछन्–‘ के गर्ने छोरो मान्छे रुदै हिड्न पनि नहुने, सम्झिदा भक्कानिन्छ मुटु । परिवार र छिमेकका मानिसहरु समेत शोकाकुल छन् ।
विवाहको ६ दिन पछि राधिकाले आफु र घर परिवार कसैलाई नसोधी घर देखि धेरै तल रहेको वजारमा खुसुक्क मेडिकल खोज्दै किन हिडिन ? भन्ने कुराको स्मरण गरिरहेका छन् झबिलाल । उनले थपे–‘ त्यस दिन विहान मैले उनलाई केहि कुरा सम्झाएँ । हामीले घर पनि बनाउन लागेका छौं , घर बनाउँदा र विवाहको सालभरी सत्रु लाग्छन् भन्छन् । सजग हुनु, घर देखि कतै नजानु, घर बनाउने मान्छे संग पनि नवोल्नु आज तिमी खान पकाउनु भनेर म स्कुल हिडे । म हिडेको केहि वेर पछि उनि घरका कसैलाई नसोधी हिडिछन् । छिमेकी दाजुले मलाई फोन गरेर भन्नु भयो राधिका तिमीलाई सोधेर हिडेकी हुन् र घर छैनन् नि ? म दङ्ग परेर उनलाई फोन गरेर सोधे । ‘म पेट दुखेर जचाउँन आएकी छु’ भनिन् । म उहि पाईलो उनलाई लिई गएँ । त्यहाँबाट तानसेनको एक मेडिकलमा ल्याएर जचाएर औषधी लिएर आईयो । तर अहिले थाह भयो उनले त्यो औषधी नै खएको देखिन्न । यस घटना पछि मलाई सोँचमग्न बनाएको छ र केहि आशंका जन्माएको छ ।’
‘उनले जे कुराको तनाव थियो त्यो कुरा नढाँटी भनेको भए जस्तो पनि मलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो । उनी धरान पुगेर वा अन्य स्थानमा कुनै पुरुष संग बसेरै आएको भए पनि म स्वीकार गर्थे उनले त्यसरी ज्यान हाल्न हुँदैन्थ्यो । ’ झबिलाल भन्छन ।
वुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा प्रथम वर्षमा पढ्दै गरेकी राधिका संग आफन्त मार्फत उनलाई माग्न जाँदा मात्र पहिलो भेट भएको बताउदै झबिलालले त्यस अघि उनलाई नदेखेका र नचिनेको बताए ।
झबिलाल भन्छन्, ‘माग्न जाँदा आफुहरु दुई जना विच कुराकानी गर्ने वातवरण मिलाईयो । उनि म संग विवाह गर्न राजी भईन, त्यस लगत्तै फागुन १६ गते विवाह गरिएको थियो । त्यस अघि उनको परिवारलाई समेत मैले चिनेको थिईन ।’
घटना प्रकृतिलाई सरसर्ती केलाउदा सम्भवत: राधिकाको अन्य पुरुषसंग केहि सम्वन्ध भएको आशंका गर्ने ठाउँ छ । उनका श्रीमान झबिलालको भनाईले पनि यसै कुरालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । यसै चक्करमा राधिकाको १९ वर्षको कलकलाउदो उमेरमा ईहलिला समाप्त भएको छ । प्रहरीले पोष्टमार्टमको रिपोर्ट कस्तो आयो ? घटनाको गम्भरतापूर्वक अनुसन्धान गरी सत्य, तथ्य पत्तालगाई दोषिलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने छ भन्ने विश्वास स्थानीयले गरेका छन् ।